သံမဏိပြားထုတ်လုပ်သူများ - တရုတ်သံမဏိပြားစက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူများ
304 brushed nickel sheet သတ္တုကိုရွှေအရောင်နီကယ်သတ္တုတုန်ခါမှု finish 304l stainless steel ပြား
304 အရောင် brushed သံမဏိစာရွက်ကဘာလဲ?
သံမဏိ 304 ဝါယာကြိုးပုံပန်းကန်သံမဏိ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဝါယာကြိုးကဲ့သို့ texture ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းသည်သံမဏိထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်သည် Matt ဖြစ်ပြီးအသွင်သဏ္ဌာန်ကိုဂရုတစိုက်ပြုလုပ်ထားသော်လည်း၎င်းကိုမခံစားနိုင်ပါ။
ဒါဟာသာမန်ထက် wear- ခံနိုင်ရည်သည် တောက်ပသောသံမဏိ နှင့်ပိုမိုအဆင့်မြင့်ကြည့်ရှုသည်။
လှပသောမျက်နှာပြင်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုဖြစ်နိုင်ခြေ; ကောင်းသောသံချေးမခြင်း၊ သာမာန်သံမဏိများထက်ကြာရှည်ခံမှု၊ မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိ, ဒါကြောင့်ပါးလွှာပြားကိုအသုံးပြု။ ဖြစ်နိုင်ခြေ; မြင့်မားသောအပူချိန်ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့်မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိ, ဒါကြောင့်မီးကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်; ပုံမှန်အပူချိန်အပြောင်းအလဲနဲ့, ဒါကလွယ်ကူပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲနဲ့။ မျက်နှာပြင်ကုသရန်မလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်ရိုးရှင်းပြီးထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။ သန့်ရှင်းမြင့်မားပြီးအောင်; ကောင်းသောဂဟေစွမ်းဆောင်ရည်
321 Hot rolled သံမဏိပြား
သံမဏိ 321 / 321H အကြောင်းဖော်ပြချက်
၎င်းသည်အပူချိန် ၈၀၀ မှ ၁၅၀၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိ (၄၂၇-၈၁၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) နှင့်ခရိုမီယမ်ကာဘိုက်မိုးရွာသွန်းမှုတို့တွင် Intergranular တိုက်စားခြင်းကိုကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံတွင်တိုက်တေနီယမ်များထည့်သွင်းခြင်းကြောင့်သံမဏိပြား ၃၂၁ သံမဏိပြားများသည်ခရိုမီယမ်ကာဗိုက်ဖွဲ့စည်းမှုတွင်တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
321 အပူတုံးသံမဏိပြားများသည်၎င်း၏မြင့်မားသောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အားသာချက်များရှိသည်။ 304 အလွိုင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက 321 အလွိုင်းသံမဏိပိုကောင်းပြွန်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကျိုးကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထို့အပြင် 304L ကိုလည်း sensitization နှင့် intergranular ချေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Alloy 321 (UNS S32100) သည်အလွန်တည်ငြိမ်သောသံမဏိဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အပူချိန် ၈၀၀ မှ ၁၅၀၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိ (၄၂၇-၈၁၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) နှင့်ခရိုမီယမ်ကာဘိုက်မိုးရွာသွန်းမှုတို့တွင် Intergranular တိုက်စားခြင်းကိုကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံတွင်တိုက်တေနီယမ်များထည့်သွင်းခြင်းကြောင့်သံမဏိပြား ၃၂၁ သံမဏိပြားများသည်ခရိုမီယမ်ကာဗိုက်ဖွဲ့စည်းမှုတွင်တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ အလွိုင်း ၃၄၇ သည်၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နီအိုဘီယမ်နှင့်တမ်တာလမ်များပေါင်းထည့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ။
အလွိုင်း ၃၂၁ နှင့် ၃၄၇ တို့ကိုအပူချိန်မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် 800-1500 ° F (427-816 ° C) တွင်ရေရှည်အသုံးပြုရန်အသုံးပြုသည်။ လျှောက်လွှာတွင်ဂဟေသို့မဟုတ်အချိန်တိုအပူသာပါ ၀ င်ပါက၎င်းကို 304L ဖြင့်အစားထိုးပါ။
321 နှင့် 347 သတ္တုစပ်များ၏မြင့်မားသောအပူချိန်လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအားသာချက်များသည်သူတို့၏ကောင်းမွန်သောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။ ၃၀၄၊ ၃၀၄L၊ ၃၂၁ နှင့် ၃၄၇ တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဤသည်တည်ငြိမ်သောသတ္တုစပ်များ၏ဖိအားသည်အမေရိကန်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘွိုင်လာစည်းမျဉ်းများနှင့်အပူချိန်မြင့်မားသောဖိအားပေးသည့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သတ္တုစပ် ၃၂၁ နှင့် ၃၄၇ သတ္တုစပ်၏အများဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်မှာ ၁၅၀၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၈၁၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ဖြစ်ပြီး၊ ၃၀၄၊ ၃၀၄ လီယမ်သည် ၈၀၀ ° F (၄၂၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ကန့်သတ်ထားသည်။
321 နှင့် Alloy 347 တွင်ကာဗွန်ပါဝင်မှုမြင့်မားပြီးသူတို့၏ UNS နံပါတ်များမှာ S32109 နှင့် S34709 ဖြစ်သည်။
409 409L Hot Sted သံမဏိပြား
အထူ: ၁.၂ မီလီမီတာ - ၁၆ မီလီမီတာ
အလေးချိန်ခွက်: 1.0MT - 3.0MT
410 410s သံမဏိပြားတူးဖော်ထားသည့်အပူ
သံမဏိ ၄၀၉ နဲ့ ၄၁၀ ကြားကဘာကွာခြားသလဲ။
409 - တိုက်တေနီယမ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းမှအပကားကားအိပ်ဇောပိုက်အဖြစ်အများအားဖြင့်အသုံးပြုသောဈေးအပေါဆုံးပုံစံသည်ဂဟေဆော်ခြင်း၊ အနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်၊
410 — Martensite (စွမ်းအားမြင့် Chrome သံမဏိ)၊ ကောင်းမွန်သော ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့်ချေးနိုင်မှုအားနည်းခြင်း၊ ၄ င်း၏ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုတွင် ၁၃% ခရိုမီယမ်၊ ၀.၁၅% (သို့) ကာဗွန်အနည်းဆုံးနှင့်အခြားဒြပ်စင်သတ္တုစပ်အနည်းငယ်ပါဝင်သည်။ ကုန်ကြမ်းများသည်စျေးနှုန်းချိုသာ။ သံလိုက်စွမ်းအင်ရှိပြီးအပူဖြင့်ကုသနိုင်သည်။ အထွေထွေအသုံးပြုမှုများတွင်ဝက်ဝံများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးအဆောင်များနှင့်ကိရိယာများ၊
သံမဏိ 410 430 430F 430LX
သံမဏိ 410 တရုတ်၏ 1Cr13 သံမဏိ S41000 (American AISI, ASTM) နှင့်ညီမျှသည်။ ၀.၁၁၁ ကာဗွန်၊ သံမဏိ ၀.၁၃% ခရိုမီယမ် ၀၁ ၄၁၀: ကောင်းမွန်သောချေးခြင်း၊ စက်ယန္တရားပြုခြင်း၊ ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက်ဓါးများ၊ အဆို့ရှင်များ။
၏အပူကုသမှု သံမဏိ 410: ဖြေရှင်းချက်ကုသမှု (ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) 800-9000 နှေးကွေးအေးသို့မဟုတ် 750 အစာရှောင်ခြင်းအအေး
သံမဏိ 430 သံမဏိကိုယ်ထည်မှာအချေးခံနိုင်ခြင်းနှင့်အထွေထွေသံမဏိတန်း၊ အပူစီးကူးနိုင်ခြင်းသည် austenite ထက်သာလွန်သည်။ အပူတိုးချဲ့မှုကိန်းသည် austenite ထက်သေးငယ်သည်၊ အပူပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်သောဒြပ်စင်တိုက်တေနီယမ်ကိုထည့်ခြင်း၊ အဆောက်အအုံအလှဆင်ခြင်း၊ လောင်စာဆီသုံးပစ္စည်းများ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ။
430F သည်သံမဏိအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ၄၃၀ သံမဏိတွင်အခမဲ့ဖြတ်တောက်နိုင်သောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အလိုအလျောက်ခုံများ, သော့ခလောက်နှင့်အခွံမာသီးအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
430LX သည် Ti သို့မဟုတ် Nb ကိုသံမဏိ 430 သို့ပေါင်းထည့်သည်။ C ပါဝင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ရေပူရေလှောင်ကန်များ၊ ရေပူစနစ်များ၊ သန့်ရှင်းရေးသုံးကိရိယာများ၊ အိမ်သုံးအကြမ်းခံပစ္စည်းများ၊ စက်ဘီးစီးစက်များစသည်တို့တွင်အသုံးပြုသည်။
304 သံမဏိနှင့်သံမဏိ 430 နှိုင်းယှဉ်:
၁။ ချေးခြင်း: သံမဏိ 430 16.00-18.00% ခရိုမီယမ်ပါ ၀ င်ပါသည်။ ၎င်းမှာအခြေခံအားဖြင့်နီကယ်သတ္တုများမရှိပါ။ သံမဏိ ၃၀၄ တွင်ခရိုမီယမ်နှင့်နီကယ်သတ္တုများပိုမိုပါဝင်သောကြောင့်သံမဏိအချပ်ခံ ၄၃၀ သည်သံမဏိ ၃၀၄ ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
၂။ တည်ငြိမ်မှု သံမဏိ 430 သံမဏိ ၃၀၄ သံမဏိသည်သံမဏိ ၃၀၄ သံမဏိ ၃၀၄ သံမဏိ ၄၃၀ ထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်သည်။
3.toughness: သံမဏိ ၃၀၄ သံမဏိသည်ခိုင်မာသောခံနိုင်ရည်ရှိသည် သံမဏိ 430
4. သာမန်စီးကူးမှု: သံမဏိ 430 ferrite သံမဏိ 304 austenitic အပူလွှဲပြောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ထက်သာ။ ကောင်း၏,
၅ ။ သံမဏိ 430 တိုက်တေနီယမ်၏တည်ငြိမ်သောဓာတုဒြပ်စင်တစ်ခုထပ်ပေါင်းထည့်ပြီးဂဟေဆော်သည့်နေရာ၏စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများသည်သံမဏိ ၃၀၄ ထက် ပို၍ ကောင်းသည်။
2507 Hot rolled သံမဏိပြား
ဘာလဲ ၂၅၀၇ သံမဏိပြားတုံးသံမဏိပြားများ
2507 သည် ferritic-austenitic (duplex) သံမဏိဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ferritic သံမဏိနှင့် austenitic သံမဏိတို့၏အကျိုးရှိသောဂုဏ်သတ္တိများများစွာကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ သံမဏိတွင်မြင့်မားသောခရိုမီယမ်နှင့်မော်လီဘိုက်နမ်ပါဝင်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ထိရောက်သောခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ တွန့်တိုခြင်းနှင့်တူညီသောချေးခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Dual-phase microstructure သည်သံမဏိအားဖိစီးမှုမှကာကွယ်သည့်အက်ကွဲခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီးစက်မှုစွမ်းအားသည်လည်းမြင့်မားသည်။
သံမဏိ Checker ပန်းကန်
ဘာဖြစ်သလဲ သံမဏိ Checker ပန်းကန်
သံမဏိ Checker ပန်းကန်: သံမဏိပြားသည်သံမဏိမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောတွင်းများကိုဆွဲရန်စက်၏ဆွဲငင်အားကိုအသုံးပြုသည်။ Herringbone ပန်း၊ သေးငယ်သောဘဲဥပုံ၊ Millet ပန်း၊ ပင်လျှင်ငါးပွင့်၊ ပတ် ၀ န်းကျင်ခုံးအပေါက်၊ ခလုတ်ပုံသဏ္holeာန်အဆို့စသည်။ ၁။ ချော်ခြင်း၊ ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်း၊ ၂။ မီးဘေးကာကွယ်ခြင်းနှင့်ရေစိုခံခြင်း၊ သန့်ရှင်းစွာဆေးကြောနိုင်ခြင်း၊ 3. နောက်ဆက်တွဲသုတ်ဆေးပြုလုပ်ခြင်းသည်လက်ဗွေများမပါဘဲပြုလုပ်နိုင်သည်။
သံမဏိအများအားဖြင့်အသုံးပြုသော polishing နည်းလမ်း：
လောလောဆယ်အသုံးများသောနည်းများမှာ electrolytic polishing, electrochemical polishing, Mechanical polishing
လျှပ်စစ်နှင့်ဓာတုဆိုင်ရာအရောင်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဆင့်နှစ်ဆင့်ခွဲခြားထားသည် - (၁) Macro leveling - ဖျက်သိမ်းလိုက်သောထုတ်ကုန်သည် electrolyte သို့ပျံ့နှံ့သွားပြီးမျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုလျော့နည်းသွားသည်။ Ral μm။ (၂) အလင်းနည်းသောအနိမ့်အမြင့် - Anodic polarization၊
Electrolytic polishing: ပိုတက်ဆီယမ်အားအက်ဆစ်ဓါတ်ကူပစ္စည်း (အားကောင်းသောအက်စစ်) ကို အသုံးပြု၍ ပိုလန်နမူနာကို (၇ မီတာခန့်ခန့်) တွင်ထည့်ပြီး anode ဖျက်သိမ်းသည်။ လက်ရှိပမာဏ၏ကြီးမားသောကြောင့်ထွက်ပေါ်လာသောအစိတ်အပိုင်းများသည်ပိုမိုလျင်မြန်စွာပျော်သွားပြီးမျက်နှာပြင်မှာပြားနေပြီးနောက်ဆုံး Polished effect သို့ရောက်ရှိသည် (အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ၁၀ မိနစ်အတွင်းမြင်နိုင်သည်) ။ Electropishing ၏အခြေခံနိယာမ - ဓာတုဆေးကြောခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်မျက်နှာပြင်ကိုချောမွေ့စေရန်ပစ္စည်း၏မျက်နှာပြင်၏သေးငယ်သောခုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုရွေးချယ်ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဓာတု polishing နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် cathode တုံ့ပြန်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီး၊
စက်မှုပိုလန်။ သံမဏိပြား၏အကြမ်းခံသောမျက်နှာပြင်သည်အလှဆင်ထားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်ဖြစ်ရမည်။ roller frame ကို belt polishing machine တစ်ခုဖြင့်အရောင်တင်သည်။ ပထမ # 120 # ပွန်းပဲ့သောခါးပတ်ဖြင့်မျက်နှာပြင်အရောင်ကိုတစ်ချိန်ကပစ်ချပြီး 240 ကိုပြောင်းပါ။ # ပွန်းပဲ့သောခါးပတ်၊ မျက်နှာပြင်သို့ပစ်ပါ။ အရောင်တောက်ပနေပါက 800 # ပွန်းပဲ့သောခါးပတ်ကိုပြောင်းပြီးမျက်နှာပြင်အရောင်သို့တစ်ကြိမ်ပစ်ပါ။ ထိုအခါ 1200 # ပွန်းပဲ့ခါးပတ်ကိုပြောင်းလဲနှင့်သံမဏိပြားကိုအလှဆင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပစ်။
316 သည်အထူးသံမဏိတစ်ခုဖြစ်သည်။ Mo ဒြပ်စင်သည်ချေးခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းကြောင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်မှုမြင့်မားပြီးအပူချိန် ၁၂၀၀ မှ ၁၃၀၀ ဒီဂရီအထိပြင်းထန်သောအခြေအနေတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ 316L သည် molybdenum ပါဝင်သောသံမဏိအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ သံမဏိတွင် molybdenum ပါဝင်မှုကြောင့်ဤသံမဏိ၏စုစုပေါင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည်သံမဏိ ၃၁၀ နှင့် ၃၀၄ သံမဏိများထက် ပို၍ ကောင်းပါသည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်အခြေအနေများတွင်ဆာလ်ဖာအက်ဆစ်၏အာရုံစူးစိုက်မှု 15% ထက်နိမ့်သည်သို့မဟုတ် 85% ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအခါ, 316L သံမဏိကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးရှိပါတယ်။ အသုံးပြုသည်။ 316L သံမဏိသည်ကလိုရိုက်တိုက်ခိုက်မှုဒဏ်ကိုကောင်းစွာခံနိုင်ပြီးအများအားဖြင့်ပင်လယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုသည်။ 316L သံမဏိအမြင့်ဆုံးကာဗွန်ပါဝင်မှုသည် ၀.၀၃ ဖြစ်ပြီးအငွေ့ပြန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်သည့်နေရာနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်နေရာများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သံမဏိ ၃၁၀ တွင်ကာဗွန်ပါဝင်မှုနှုန်းသည် ၀.၂၅%၊ 310S သံမဏိတွင်ကာဗွန်ပါဝင်မှုအနည်းဆုံး 0.08% ရှိပြီးအခြားဓာတုပစ္စည်းများသည်တူညီကြသည်။ ထို့ကြောင့်သံမဏိ ၃၁၀ ၏ခိုင်ခံ့မှုနှင့်မာကျောမှုသည်ပိုမိုမြင့်မားပြီးချေးယူခြင်းသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည်။ သံမဏိ 310S သံမဏိ၏ချေးသည်ပိုကောင်းသည်နှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုအနည်းငယ်နိမ့်သည်။ 310S သံမဏိသည်၎င်း၏ကာဗွန်ပါဝင်မှုနည်းပါးသောကြောင့်အရည်ပျော်ရန်ခက်ခဲသည်၊ ထို့ကြောင့်စျေးနှုန်းမှာမြင့်မားသည်။